Delestazy eto Antananarivo Vokatry ny fahasimban’ny transformateur ao Ambodivona
Fera fipasohana nitarika hain-trano Kila forehitra ny "coffre" nisy vola
Tamin'ny 11 ora antoandro, nisy trano lehibe misy rihana iray teny Andrefambohitra Ampitatafika kilan'ny afo omaly talata 14 janoary.
Arina vokarin’ny orinasa Fanalamanga Ampy tsara ho an’Antananarivo, Toamasina ary Moramanga
Nanamarika ny Tale jeneralin’ny orinasa Fanalamanga, Rakotonirina Augustin fa tsy misy atahorana fa tena mbola ampy tsara ny arina avoakan’ny orinasa amin’ny faritra telo dia Antananarivo, Toamasina ary Moramanga.
Ranon’ny Jirama nalotobe Fantsona efa antitra no nahatonga azy
Efa niverina amin’ny laoniny ankehitriny ny lokon’ny rano fisotro madio vatsian’ny orinasa JIRAMA eto an-drenivohitra sy ny manodidina raha tena naloto be ny alatsinainy maraina teo.
Ilanivato Lambamenana Notrohan’ny CUA ny rano mihandrona
Ao anatin’ny fotoam-pahavaratra isika izao, ka maro amin’ireo faritra iva eto an-drenivohitra no dibo-drano na ny lalana na ny any anaty tanàna. Anisan’ireny ny eny Ilanivato Lambamena ho any Anosipatrana, Boriborintany faha-4, Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Boriborintany faha-6 Nosoloina rarivato ny lalana « béton » simba
Mitohy hatrany ny fanamboaran-dalana ataon’ny ekipa teknika avy ao amin’ny boriborintany fahenina Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Saika mitaraina ny amin’ny delestazy lavareny iainana eto an-drenivohitra sy ny manodidina avokoa tato anatin’ny herinandro izao ny mpanjifan’ny orinasa JIRAMA.
Maharitra hatrany amin’ny ora roa izany raha kely indrindra ka tsy vitsy ireo zary tapaka asa fivelomana tsy fidiny. Nitondra fanazavana mahakasika izany ny teo anivon’ny JIRAMA ny faran’ny herinandro teo ka nambaran’izy ireo fa vokatry ny fipoahan’ireo “transformateur” roa an’ity orinasa ity etsy Ambodivoina no mahatonga izany. Tamin’ny alahady sy alatsinainy lasa teo no nitrangan’izany raha araka ny fantatra ka ny faritra avaratra toa an’Ivato sy ny manodidina no tena lasibatra. Mba hahafahana manampy ny mpanjifa rehetra anefa dia voatery nanampy tosika tany amin’ireo mpamatsy ny herinaratra any amin’iny faritra atsimo iny ny JIRAMA, hoy ny fanazavana. Tsy mahazaka ny filàn’ny mpanjifa rehetra anefa izany rehefa hariva ny andro ka tapaka ihany koa hany ka tsy maintsy miezaka mandamina sy mandrindra izany ity orinasa iray ity. Lany eo amin’ny ora roa na telo eo ho eo izy ireo manatanteraka izany, antony mahatonga ny delestazy haharitra ora roa na telo ihany koa. Tafiditra ao anatin’ireo ora roa ireo moa ny fitohanana eny an-dalana vakivakian’ireo mpiasan’ny JIRAMA araka ny fanazavana hatrany. Eo an-danin’izay anefa dia vao mainka miaka-bidy ny vidin-jiron’ny JIRAMA isam-bolana fa tsy misy fihenany ary raha vantany vao tara ny fandoavana izany dia tapaka avy hatrany.